Garoowe: Libraryga Puntland oo lagu soo bandhigay Buugga HIMILADADA HANO. | Sahan radio
Garoowe: Libraryga Puntland oo lagu soo bandhigay Buugga HIMILADADA HANO.
Buugga Cusub ee Himiladada Hano ee uu qaraaga ka yahay Maxamed Ismaciil Maxamed (Siibed) ayaa ku qoran afka hooyo ee Soomaaliga,buuga waxaa lagu soo dabacay dalka maraykanka oo uu qoraagu deganyahay.
Munasabad daahfur ah ayaa loogu qabtay buuga Xarunta Libraryga puntland ee Magaaladda Garoowe ,waxaana soo qabanqaabiyey howlwadeenadda iyo Masuuliyiinta libraryga Puntland oo kaashanaya Somali Family Services.
Munasabadda waxaa kasoo qaybgalay boqolaal dadweyne ah oo isugu jira Masuuliyiinta dowladda,Hay,adaha Caalamiga ah & kuwa maxaliga ah,Haweenka,Dhalinyaradda,Odayasha,Culimadda,Ardayda Jamacadaha,Qurbe joogta & marti sharaf kale,goobta waxaa lagu soo bandhigay buuga Himiladada Hano.
Agaasimaha Hay,adda Somali Family Services C/rashiid Maxamed Cali ayaa hadal kooban oo soo dhaweyn ah ka jeediyey,waxaana uu sheegay in bandhigaani uu qayb ka yahay adeegyadda uu Libraryga puntland ummada u hayo,iyadoo qoraaga buuga oo waqti iyo cilmiba geliyey buugaan uu librarygu gacan ku siinayo ,isla markaana ku dhiirigelinayo qorista buugaag kale oo dadku ka helaan macluumaad ay wax kaga badalan noloshooda iyo horumarkooda.
Agaasimuhu waxaa uu ka qaybgalayasha ka codsaday in buugaan qoristiisa,dabicidiisa iyo hindisidiisa uu galay waqti iyo khrash badan,sidaa awgeedna loo bahanyahay in qoraaga lagu caawiyo in laga iibsado,madaama uu macluumaad badan xanbaarsanyahay buugani.
Qoraa Maxamed Ismaciil Maxamed (Siibed) ayaa isna qaatay hadalka waxaana uu sharaxay buuga iyo waxyaalaha uu xanbaarsanyahay,tilmamaha uu sida gaarka ah usiinayo akhristayaasha,wixii ku dhaliyey qorista buuga iyo muhiimadda uu u leeyahay dadka wax akhriya.
ka qaybgalayaasha ayaa u mahadceliyey qoraaga buuga Maxamed Ismaciil Maxamed ,waxaana ay waydiiyeen su,aalo kala duwan oo la xiriira buuga,waxaana uu mid-mid uga jawaabay su,aalaha oo uu ka bixiyey faahfaahin,waxaa kaloo ay ku biiriyey ka qaybgalayashu qoraaga talooyin muhiim ah oo ay ka midyihiin in aanu ka caajisin qorista iyo hindisidda buugaagta noocaani ah ee xanbaarsan cilmiga wax ku oolka ah.
Buuga HIMILADDA HANO waxaa uu ka midyahay buugaagta yar ee ku qoran luuqadda soomaaliga isla markaana waxaa uu buugaani si gaar ah uga hadlayaa talooyin iyo tusalayn ku adan sidii uu qorku u marayn lahaa noloshiisa.
Bugga ayaa lagu wadaa in si lamid ah daahfurkaan loogu sameeyo magaaladda Boosaaso iyo magaalooyin kale oo ka mid ah soomaaliya.